Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo hanjabaad culus u jeedisay xarakada Alshabaab. – SBC
Ahlu Sunna Wal Jamaaca oo hanjabaad culus u jeedisay xarakada Alshabaab.
Muqdisho: Saraakiil ka Tirsan Ahlu Sunna waljamaca Ayaa waxaay hanjabaad Ay U Jeediyeen Xarakada Alshabaab Taas Oo Ah In Ay ka saari Doonaan Guud Ahaanba Gobolka Gedo Oo Iminka Qeybo Kamid Ah Ay gacanta Ku hayaan Xarakada Alshabaab.
Sheekh Maxamed Al-Qaadi oo ka mid ah saraakiisha Ahlu Suna Waljamaaca ee gobalkaasi oo saxaafada la hadlay ayaa Waxaa Uu Sheeegay In Ay U diyaar garoween Sidii Ay U Ciribtirilahaayeen Kooxda Alshabaab sida uu sheegay.
Waxa uu tilmaamay in uu qorshuhu yahay in ay la wareegaan degmooyinka Baardheere iyo Garbahaaray oo ay ku sugan yihiin haatan xarakada Al-Shabaab.
Asaga oo hadakiisa siiwata ayaa waxa uu carabka ku dhuftay sargaalkaan in haatan uu socdo diyaar garowgii ugu danbeeyay oo ay ku jiraan ciidamada Ahlu Sunna.
Hanjabaadan waxaa ay Ku Soo Beegmaysaa Iyadoo Dhawaan Xarakada Alshabaab Ay weerar Ku Qaaday magaalada Dhuusamareeb Islamarkaasna saacado Kooban ay gacanta Ku haysay magaalada walow markii Dembe laga saaray magaalada .
Maxamed Xaaji Xasan Abuukar